I-Commerciële Productrecensies - I-Handige Tips Door Semalt
Ukubuyekezwa komkhiqizo kubonise ukusabela okuxubekile phakathi kwabanikazi be-e-commerce esitolo. Ngesikhathiukubuyekezwa kudala ukuzethemba kubadlali abathile bebhizinisi le-intanethi abathola ukukhuluma okuhle ngemikhiqizo yabo kwabanye, ukubuyekezwa kwayokubika kabi amakhasimende kusuka ezitolo. Kodwa-ke, lesi sihloko sisebenzela ukufundisa nokubuyisa ukholo phakathi kwabanikazi besitolo ababiimpendulo evela kwabathengi be-intanethi - proven weight loss medication.
uMichael Brown, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, uchaza ukuthi kokubili ukubuyekezwa komkhiqizo omubi nokuhle kuthinta kanjani ithrafikhi yewebhu.
Ukubaluleka kokubuyekezwa komkhiqizo
Izibalo zibonisa ukuthi cishe amaphesenti angu-63 wamakhasimende ase-intanethi akhetha ukuthenga ku-intanethi kusuka ezitolo ezinesigaba esizinikezele sokubuyekezwa komkhiqizo kuwebhusayithi. Naphezu kwesigaba sokubuyekeza esiyisisekelo kumakhasimende ukuveza ukubonga kwabo noma ukukhungatheka ngomkhiqizo, ezinye zezinkulumo ezivezwe kulezi zihloko azibonakali iqiniso mayelana nesipiliyoni somthengi. Abanikazi kumele bayeke ukukhathazeka mayelana nezimpendulo ezingalungile ngoba imibono ingase ingabonakali yonke iqiniso mayelana nesipiliyoni samakhasimende.
Izibuyekezo ezimbi azibi
Abanikazi besitolo se-intanethi bathola ukubuyekezwa okungalungile akufanele bakhathazeke. Ucwaningoibonisa ukuthi ukubuyekezwa okubi akubi nakancane kunabantu abangamaphesenti angama-86 abathengisa izimpahla zokuthengwa ku-Inthanethi ngezibuyekezo ezimbi..Cishe amaphesenti angu-95Abantu abathengi ku-intanethi bangathembi ukubuyekezwa kukaNkulunkulu mayelana nemikhiqizo abafisa ukuyithenga. Izilinganiso zenkanyezi yomkhiqizo zingabaza futhikubonakala kungokoqobo futhi ngaleyo ndlela ugcine amakhasimende.
Ukubuyekezwa Khulisa Isigaba Sosesho
Ukwamukelwa kwe-SEO indlela yezinjini zokusesha kusho ukuthi ngaphezulu okuqukethwe okuphathelene nomkhiqizo kwi-intanethi kalula okuqukethwe kutholakala izinjini zokusesha. I-SEO idinga ukuvama kokhiyeamagama noma izintambo zokusesha kuwebhu ukuze zenze ukwandisa ukubonakala kwewebhu kuwebhusayithi. Amazwana noma ukwanda okubi noma okuhleinani lokukhulunywa ngalo komkhiqizo noma iwebhusayithi ethize okwandisa amathuba okuheha umgwaqo.
Amazwana Yenza amakhasimende asebenze
Sebenzisa ubukhona bamakhasimende ukuchitha isikhathi kwiwebhusayithi ukwakha ubuqothofuthi uthembele. Abanikazi abaningi bebhizinisi le-e-commerce bahlangabezana nenani elikhulayo lomgwaqo ngokuhlanganyela nabantu abavakasheleyo nokubeka amazwanakwiwebhusayithi yabo. Amakhasimende athola ulwazi olucacile mayelana nemikhiqizo, futhi futhi, silungele ukubuya futhi ukuthenga izinto.
Khuthaza Ukubuyekeza kusuka kumakhasimende
Amakhasimende amaningi ku-inthanethi athande ukufundwa ukubuyekezwa okusele ngamanye amakhasimende ukuhambisa isinqumo sabo sokuthenga umkhiqizo. Kufanele kuqaphele ukuthi abanye abafundi abakhuthele bahluleka ukushiya imibono nezibuyekezo zabo. Ukuthola izibuyekezofuthi ukuphawula kuzosiza ukwandisa isimo se-intanethi somkhiqizo ngisho nokwelashwa kwe-SEO kwewebhusayithi ngakho-ke kufanelekile ukukhuthaza.
Ukuhwebelana nge-E-commerce kudinga ukuthi ukusetshenziswa kwama-generator wokubuyekezwa kuhlinzekwe umphumela ophezulu we-SEO. Ukukhuthaza amakhasimende ukuthi abukeze imikhiqizo ngokusebenzisa izinhlelo ze-imeyli ezakhiwe ezithumela izikhumbuzo zingandisa inani lezibuyekezo. Yenzaniukwehla kwezibuyekezo kube mnandi futhi kulula ukuthola izinzuzo eziningi kusuka kumazwana ngenkathi kuthuthukisa i-SEO yewebhusayithi.